Resaka loha tapaka sy halatra taova Nisavorovoro i Toamasina
Loza mahatsiravina Nipotsaka ny atidohan’ilay zaza…
Sesilany ny lozam-pifamoivoizana amoizana ain’olona na eto Antananarivo na any amin’ny faritra. Nahitana zaza iray voadonan'ny fiara tsy mataho-dalana teny Anosibe omaly tolakandro, ka maty tsy tra-drano.
Antanimeva distrikan’i Morombe Omby zaton’Atoa Soatogno indray no lasibatry ny miaramila
Tsy mitsahatra mandroba ny ombin’ny Antandroy ao amin’ny distrikan’i Morombe ny miaramila sy ny sasantsasany amin’ny Dinabe any an-toerana ka mampiasa andian-jiolahy miaraka
Fanafihana mitam-basy Antananarivo Voatifitra ny iray, azo sambo-belona ny jiolahy enina
Fikambanan-jiolahy « bande de 10 » mpanao fanafihana mitam-piadiana teto an-drenivohitra no ravan’ny polisy,
Hajo Andrianainarivelo « Miroso tsara ny fifampiresahana”
Antontan-taratasy maro no efa voaray eo anivon`ny birao manokana napetraka hisahana ny fifandraisana amin`ireo mponina voakasiky ny tetikasa Tanà-masoandro etsy amin`ny Village Voara Andohatapenaka.
Vonjy taitra sy hain-trano Hifanampy ny polisy sy ny mpamonjy voina
Notanterahina omaly nandritra ny fivoriana isan-kerinandron’ny kaomisaria Antananarivo Renivohitra, teo amin’ny polisim-pirenena Tsaralalana, ny fifanaraham-piaraha-miasa eo anivon’ny polisim-pirenena sy ny sampana mpamonjy voina.
Lozam-pifamoivoizana RN2 Resin-tory ny mpamily, niala an-dalana ny fiara
Nitrangana lozam-pifamoivoizana tany Ampasimadinika, 60 km tsy hiditra an’i Toamasina, tamin’ny lalam-pirenena faha 2, avy aty an-drenivohitra.
Mbola ao anatin’ny famotorana tanteraka ny mpitandro filaminana ao Toamasina, raha ny fampitam-baovaony.
Roa tamin’ireo mpandoro kodiarana no notanan’ny mpitandro filaminana raha 10 mahery izy ireo no voasambotra nandritra ny sakoroka izay nitranga teo Morarano, ny zoma teo. Telo kosa ny fiaran’ny mpiaro ny vahoaka sy ny fananany no nahitana fahasimbana, raha ny fampitam-baovao ifarimbonan’ny polisy sy zandary miasa ao Toamasina. Mbola manjavozavo hatreto ny fisian’ilay lohan’olona, tao amin’ilay trano nolazain’ilay mpiasa vavy iray. Nampandre ny mpitandro filaminana mantsy ity farany. Tafaporitsaka tamin’ny manodidina ihany koa ny tsilian-tsofina mahakasika io ahiahina halatra taovan’olombelona io ka izay no nampitroatra ny vahoaka. Efa nafindra toerana ny tompon-trano ho fiarovana ny ainy, ary ahitana mpitandro filaminana eo an-toerana miambina ilay trano.
Tsiahivina fa niely ela ny feo na ny « tefefaonina vorodamba » fa voasoketa ho mpaka taova ny tompon-trano. Efa ho 30 taona kosa no nahitan’ny mpandalo ilay soratra eo amin’ity tranona vehivavy ity milaza fa : Mitady mpiasa. Loharanom-baovao hafa anefa milaza fa noho ny fialonan’ny samy mpibizina jirofo sy lavanila no nahatonga ny tsaho. Ny fanadihadiana lalin’ny mpitandro filaminana ihany no hahalalana ny marina.